हिमाली गाउँहरूलाई शहर नबनाऔं
अन्तर्वार्ता/विचारशनिबार, १७ चैत्र , २०७४
नेदरल्याण्डका प्रथम सगरमाथा आरोही फ्रिट्ज फ्रिल्याण्ड अहिले विश्व पर्वतारोहण संघ (यूआईएए) का अध्यक्ष छन्। संघको व्यवस्थापन समिति बैठक (८–१० चैत) मा सहभागी हुन काठमाडौं आएका उनी भन्छन्, “नेपालीले हिमाल महसूस गर्न बाँकी नै छ।”
यूआईएए बैठकका के कस्ता विषय प्राथमिकतामा परे ?
यूआईएए विश्वका ६८ देशका ९१ संस्था र ३० लाख सदस्य भएको संस्था हो । व्यवस्थापन समिति यूआईएएको दोस्रो ठूलो निकाय हो । बैठकमा हामीले पर्वतारोहीको सुरक्षा, दिगोपन र पर्वतीय खेलहरूका विभिन्न मुद्दाबारे छलफल गर्‍यौं ।
अहिले पर्वतारोहीको मुख्य चिन्ताको विषय के हो ?
पर्वतको सौन्दर्य जोगाइराख्नु नै सबैभन्दा ठूलो चिन्ता र चुनौती हो । विशाल चीन र भारतसँग नेपाल जोडिएको छ । यी तीनै देशमा ठूला–ठूला हिमशृंखला छन् । हिमालसँग जनजीविका जोडिएको छ । विकासका नाममा पर्वतको दोहन पनि बढेको छ । बुझ्नुपर्ने कुरा– ब्रह्माण्ड एउटै छ र यसलाई सम्मान नगरी हाम्रो अस्तित्व हुने छैन ।
बढ्दो विश्वव्यापी तापमानले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी असर पारिरहेको छ । यसबारे युआईएए किन प्रभावकारी नदेखिएको ?
बढ्दो तापमानले नेपाल जस्ता देशहरूलाई धेरै असर गरिरहेको र यो असर आफ्नो देशसम्म पुग्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ । यही विश्वासका साथ हामीले पटकपटक संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि कुरा उठाइरहेका छौं । यूआईएएकै विकसित सदस्य राष्ट्रसँग पनि निरन्तर संवादमा छौं ।
नेपाल सरकारद्वारा हालै संशोधित पर्यटन ऐनप्रति यूआईएएको असहमति सुनिएको छ । समस्या के हो ?
संशोधित ऐनमा दुवै हात, खुट्टा र आँखा नभएकालाई सगरमाथा चढ्न नदिने भनिएको रहेछ । यसबाट मानवअधिकार हनन् हुनेप्रति हामी चिन्तित थियौं । तर, खुशीको कुरा, हामी नेपाल आउनु केहीअघि मात्र सर्वोच्च अदालतले यसलाई खारेज गर्न फैसला गरेछ । यसबाहेक हरेक आरोहणमा गाइड अनिवार्य लैजानुपर्ने कुरामा पनि छलफल आवश्यक छ ।
पर्वतीय पर्यटन प्रवद्र्धनमा नेपाल सरकारले थप के गर्न सक्छ ?
नेपालमा विश्वको सबभन्दा अग्लो सगरमाथालगायत आठ हजार मिटरभन्दा माथिका हिमालहरू छन् । तर, धेरै नेपालीले नै नजिकबाट हिमाल देखेका छैनन्, महसूस गरेका छैनन् । पहिले त आफ्ना पर्वतहरूलाई माया र सम्मान गर्नुपर्छ । त्यसका लागि विकासका नाममा हिमाली गाउँहरूलाई शहर बनाउने, जताततै होटल खोल्ने, भीडभाड बढाउने काम गर्नुहुन्न । सकेसम्म प्राकृतिक नै बनाइराख्नुपर्छ ।